Maitiro ekudzima maapplication pa iPhone ne iOS 13 | IPhone nhau
Maitiro ekudzima maapplication pa iPhone ne iOS 13
Nokuburitswa kweIOS 13, vakomana vanobva kuCupertino vawedzera huwandu hwe zvitsva izvo vazhinji vedu vaitarisira. Imwe yeakakurumbira ndeye yakasviba modhi, iyo modhi inotsiva chena nezvitema, zvese zviri mumamenyu ehurongwa uye mumaapplication anotsigira iyi modhi.
Asi yakauyawo nemhando dzakasiyana dzinoyevedza uye dzinoshandisika dzakadai senzira ye gadziridza maapplication kana nzira yatinofanira kudzima maapplication atakaisa pane yedu kifaa. Nhasi tinokuratidza iyo yekupedzisira: sei kudzima maapplication kubva ku iPhone ne iPad ne iOS 13 / iPadOS 13.
Icho chikonzero nei Apple yakachinja nzira yekumisikidza maapplication kana kuadzima haizivikanwe, asi mune yezvakaitika ingangove yakurudzirwa kuti ngativhure otomatiki meseji uye isu tinogara tine shanduro yazvino yekushandisa inowanikwa. Kana iwe uchida kudzima iwo maapplication ausingachashandisi, iwe unofanirwa kuita anotevera matanho.
Chekutanga pane zvese, unofanirwa bata pasi icon kusvikira menyu yesarudzo yaonekwa.
Pakati pesarudzo dzakasiyana dzinoratidzwa, tinofanirwa kubaya Rongedza Mapurogiramu.
Nokusarudza iyi sarudzo, iwo maficha anozotanga kuratidza iwo chaiwo madhanzi madiki avakagara vachiratidza pataida kudzima application.
Kudzima chairo application, isu tinongofanirwa kudaro tinya pane X iri mukona yekumusoro kuruboshwe kubva kunyorera uye simbisa kubviswa kuburikidza nebhokisi rekusimbisa rinowoneka.
Kana tangopedza, tinya pane OK, iri pakona yepamusoro kurudyi kwechiratidziro kuti upedze maitiro anotibvumidza kudzima zvinoshandiswa kana yedu terminal iri iPhone X zvichienda mberi. Kana iri iPhone 8 kana apfuura mamodheru ane Kubata ID, isu tinongofanirwa kudzvanya iyo tanga bhatani kupedzisa maitiro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 13 » Maitiro ekudzima maapplication pa iPhone ne iOS 13
Ndine IPhone XR ine IOS 13.1.2 uye kana iwe ukachengeta chero chiratidzo chinodzvanywa kwenguva yakakwana kuti vapinde mumutambo wekutamba kuti ubviswe, haufanire kusarudza kurongazve kana chero chinhu.
Zvinobudirira! Ndakauya kuzotaura zvimwe chete
Ive nekuchenjerera, kana zvemukati uye zvakavanzika zvirambidzo zvichibvumidzwa, haugone kudzima chero application. Saka kuti udzivise iri basa iwe unofanirwa kuenda ku:
Zvirongwa / Screen Nguva / Yekudzivirira. Zvemukati uye zvakavanzika.
Siri yatove shamwari yeSpotify: unogona ikozvino kukumbira mimhanzi yako yaunofarira